UDon Quixote emhlabeni: ukufika kwakhe kancane eChina | Izincwadi Zamanje
UDon Quixote emhlabeni: ukufika kwakhe kancane eChina
UMaria Ibanez | | Umlando wezincwadi
Lokhu okuthunyelwe bekufanele kuvulwe yividiyo yentsha ethile yamaShayina efunda uDon Quixote, kodwa ngeshwa ividiyo isusiwe. Ngakho-ke lokhu okuvela ku-EFE Agency ekufundweni kukaDon Quixote eRome kufanele kuchaze engifuna ukukutshela.
Asimangali ukuthi umsebenzi kaCervantes ufundwa eYurophu noma eMelika, ngisho naseMpumalanga Ephakathi naseMaghreb. Kepha… ngabe uDon Quixote uhambe ibanga elingakanani kuRocinante wakhe obuthaka? Ngisho neChina yafika uK Knight of the Sad sibalo.
Eminyakeni emine eyedlule ngangisebenza emtatsheni wezincwadi i-Instituto Cervantes eBeijing ngenkathi ngenye intambama, ngaphambi nje kokuvala, kweza ikhehla lizongikhombisa incwadi. Kwakungenye yezinhlelo zokuqala zikaDon Quixote ezanyatheliswa eChina ngesikhathi sikaMao futhi iqiniso ukuthi kwakuyilukuluku ngempela ukubona i-knight yethu ehlanyayo phakathi kwabalingiswa baseChina.
Kumele kuqashelwe ukuthi uDon Quixote akazange afike eChina kuze kube ngu-1922, ehunyushwe isuselwa esiNgisini ngaphansi kwesihloko I-Moxiazhuan (I-biography yomnumzane osangene), yize kuphela ingxenye yokuqala eyashicilelwa kusukela izazi ezingama-40s zaseChina zazingazi ukuthi kukhona ingxenye yesibili.
Ngemuva kokusungulwa kweChina entsha nguMao ngo-1949, uhulumeni wakubheka kakhulu ukuthuthukiswa kwamasiko kwathi ngo-1955 uhulumeni waseChina wagubha iminyaka engama-350 kwashicilelwa uDon Quixote, yingakho kwashicilelwa inguqulo ephelele.
Kodwa-ke, kuze kwaba ngu-1995 lapho i-Hispanist Dong Yansheng eyihumusha okokuqala ngqa ngokuphelele futhi isuka ngqo eSpain iye olimini lwesiMandarin Chinese.
Izintshisakalo zokuhumusha okunzima
Enye yezinkinga ezinkulu ngokuhumusha ngokunembile umehluko wamasiko phakathi kwamazwe. Ngakho-ke kufanele Intaba yomphefumulo, enye yezingqopha-mlando zakamuva ezincwadini zesiShayina, ukufundwa okuthakazelisayo ngolimi lwebele, kodwa uma kuhunyushelwa olimini lwesiSpanishi kuba yisicefe futhi kuhamba kancane. Noma-ke ngiqinisekisiwe.
Ukuhumusha kuwumsebenzi onzima futhi ukukwenza noDon Quixote bekungewona umsebenzi olula. Kodwa-ke, njengoba kushiwo ngumhumushi wayo uDong Yansheng:
Inkinga ixazululwa kusetshenziswa amagama anenkomba eseduze. Isibonelo, ukugqoka kanye ne-calza, izingubo ezingekho ngisho naseSpain yanamuhla, kepha njalo kuyenzeka kutholakale amagama akhonza ekubhekiseni engutsheni engenazo izinkinobho emboza isiqu somzimba okokuqala nasezindwangu ezimbili ezixhunyiwe amashubhu ngandlela thile ugoqe imilenze kowesibili. Noma ukusungula amagama amasha, okwenziwa kalula ngesiShayina, okuwulimi oluguquguqukayo olunamagama ezinhlamvu ezimbalwa.
Yize ebona ukuthi into enzima kakhulu endabeni yeCervantes ukukwazi ukuhambisa ngolimi lwesiShayina isigqi esehlukile seCervantes prose, ngemimoya emincane ye-baroque futhi egcwele amagama afanayo.
Ithuba noma ukubikezela? Ufuna ukwazi okungenani
Uma uvula I-Quixote ngengxenye yesibili bese uqala ukufunda ifayili le- Ukuzinikezela ku-Bala Lemos, ngeke kukuthathe isikhathi eside ukubona okulandelayo esigabeni sokuqala:
Futhi okhombise ukumfisa kakhulu kube ngumbusi omkhulu waseChina, ngoba ngolimi lwesiShayina kuzoba nenyanga lapho angibhalele khona incwadi neyakhe, ecela noma kunalokho engincenga ukuthi ngiyithumele kuye, ngoba wayefuna ukuthola isikole lapho okwakungafundwa khona ulimi lwesiCastilian futhi wayefuna ukuthi le ncwadi ifundwe nguDon Quixote. Ngalokhu wangitshela ukuthi ngizoba ngumphathi wesikole esinjalo.
Ukuhlekisa kukaMiguel de Cervantes kubonakala ekuzinikeleni ezinhlangothini zombili, kepha kulokhu kusenesifiso sokubona ukuthi emakhulwini amahlanu eminyaka ngemuva kwaleli hlaya, i I-Quixote kungesinye sezifundo ezingama-30 eziphoqelekile zabafundi bezikole eziphakeme zaseChina nokuthi, impela, kunesikhungo sokufundisa saseSpain esibizwa nge-Instituto Cervantes esinekomkhulu eBeijing.
Futhi ngukuthi yize sekwephuzile, impucuko enkulu yamaShayina yawela ezingeni lokucabanga, amahlaya kanye nomuzwa omsulwa wobulungiswa nobuhle obaboniswa umnumzane wethu ovelele kakhulu.
- Umdwebo kaManel Ollé, isazi sezono ePompeu Fabra University.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Umlando wezincwadi » UDon Quixote emhlabeni: ukufika kwakhe kancane eChina